↑ မောင်ဇေယျာ (၂၀၀၂ နိုဝင်ဘာ). မြန်မာလူကျော် ၁ဝဝ (ပထမတွဲ). နှစ်ချို့ဝိုင်စာအုပ်တိုက်, Page: 195-199။
↑ ၃.၀ ၃.၁ မြို့မ-မြင့်ကြွယ် (၂၀၀၃ ခုနှစ်). စာပေဗိမာန် စာပဒေသာပထမဆုရ မြို့မ ဆရာကြီး ဦးဘလွင် (သို့မဟုတ်) အမျိုးသားပညာရေးနိဒါန်းအစ. ရန်ကုန်မြို့: ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန စာပေဗိမာန်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သိန်းမောင်_(သံအမတ်ကြီး)&oldid=540534" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။